❤️ Maitiro Ekugadzira Yakanaka Tik Tok Trend muna 2020 - Facebook
Maitiro Ekugadzira Yakanaka Tik Tok Trend muna 2020
Kumutsa maitiro paTik Tok 2020 kunogona kuve kwakaoma, asi hazvibviri zvachose. Mugwaro iri, isu tichavhara nzira dzakasiyana dzekugadzira yakanaka Tik Tok maitiro muna 2020 uye izvo maitiro aya angasanganisire. Tik Tok ndeimwe yeanonyanya kufarirwa uye anotaurwa nezvepamhepo social media application. Ruzhinji rwevashandisi veTik Tok vari kutsvaga kukurumidza kugaya zvemukati, zvinofadza, zvinonakidza uye zvinosetsa.
Vazhinji vaTik Tok vapesvedzera vane mamirioni evateveri paapp vakangotanga pazasi.. Saka vakagadzira mavhidhiyo mapfupi akauya mupfungwa nemukana. Izvi zvakabatsira kuvaita nyeredzi dzeapp sezvavaikura muhukuru uye mukurumbira nekufamba kwenguva.. Kana iwe uchitarisira kuwana budiriro yakafanana, izvi zvinogona kuoma zvishoma nekuda kwehuwandu hwemukati muapp pamwe nehuwandu hwevashandisi vari kuedza kuve nemukurumbira pachikuva..
Kugadzira Mazano uye Zviri mukati
Zvekuvandudza mazano uye zvemukati, pane zvinhu zvakawanda zvaunogona kuita kugadzira inotyisa Tik Tok maitiro. Imwe yedzakanakisa nzira dzekugadzira mazano ezvemukati mako kutaura kune vamwe vagadziri. Kutsvaga zviri kuitika paTik Tok inzira huru yekuseta maitiro eapp uye kukwidziridza zvirimo. Kushandiswa kwako kuongorora Tik Tok ndiyo imwe yenzira huru dzekuita izvi.
Kupfuura zviziviso zvaunogona kuwana kubva kuapp, edza kugadzira pfungwa dzako dzemukati. Izvi zvinogona kufemerwa nezviri kuitika munzvimbo yaunogara pamwe chete nemazano egirobhu raungave uine nekuda kwezvichangobva kuitika.. Paunenge uine mamwe mazano mune reserve, chinhu chakanakisa kuita kuyedza kutumira akawanda sezvinobvira kuti uvake vanofarira uye vanobatikana vateereri mune zvemukati mako. Izvi zvinokutendera kuti ushande uchifarira iyo algorithm. Tik Tok inokurudzira vagadziri papuratifomu vanotumira nguva nenguva uye vanoburitsa zvinonakidza izvo veruzhinji vanogona kuita nazvo.
Paunenge uchigadzira zvemukati, zvakakosha kushandisa ma hashtag pese pazvinogoneka. Kushandisa hashtag paTik Tok inzira huru yekugadzira kufarira mune zvako zvirimo uye chimiro paTik Tok.. Kazhinji, kuti uwane nzvimbo pane maitiro, mavhidhiyo ako anofanira kukwezva kutarisisa kwakawanda munguva pfupi. Edza kushambadza uye kugovera zvinyorwa zvako zvakanyanya sezvinobvira usingaite kuti zviwedzere spammy.
Kana mavhidhiyo ako asina kusika uye kufarira, wadii kufunga kusanganisira dzimwe shamwari dzako. Kuve nevamwe vanhu mumavhidhiyo ako inzira huru yekuunza kufarira kwakanyanya mune izvo zvinogadzirwa uye kuwana akasiyana mapoinzi ekuona pamavhidhiyo aunogadzira..
Nekudaro, zvinodikanwa kuyeuka kuti hapana mimwe mitemo kana zvasvika kune zvemukati.. Ehe, zvirimo zvinofanirwa kutevedzera Tik Tok nhungamiro uye zvirevo zvebasa.. Kunze kweizvi, kune nzira dzakawanda dzekuita kuti zvemukati zvive zvakasiyana uye zvinonakidza kuitira kukwezva vateereri vakawanda.
Gadzira wave paTik Tok
Imwe yenzira idzo vagadziri vanotaura nezvekuzivikanwa kwaTik Tok uye maitiro ndeyekuitsanangura sefungu. Kugadzira wave paTik Tok saka chinhu chakakosha kuve nechokwadi chekuzivikanwa paTik Tok. Chimwe chezvinhu zvinonyanya kukosha kufunga usati waita Tik Tok show go viral ndeye kufunga vateereri vako..
Kuwana pfungwa yevateereri vako ibasa rakanaka rekutsvagisa rekuita sezvo richisanganisira kuti iwe unokwanisa kugadzirisa zvinoenderana nezvinodiwa nevanhu kuti vanakirwe.. Izvi zvinoita kuti vanhu vagare vakabatikana uye vachifarira izvo zvauri kupa.
Iko hakuna chaiyo yakasetwa formula yekugadzira wave paTik Tok. Zvichitaurwa izvozvo, zvinogona kucherechedzwa kuti hutachiona maitiro inzira huru yekugadzira wave paTik Tok. Maitiro akadai se “Harlem Shake”, the “Statue Challenge”, etc. inzira yakanaka yekukwana mune iyo Tik Tok chiitiko uye kubatsira kukura vateereri vako pamwe nekuwana maonero akakosha.
Vamwe vevanonyanya kufarirwa vagadziri veTik Tok vanga vachishuvira mune zvavo uye vakagadzira midhiya yave kufarirwa zvakanyanya nehuwandu hukuru hwevanhu pamhepo uye pasina.. Vagadziri veTik Tok pamatunhu epamusoro eTik Tok vanotoronga kusangana kwevateveri uye zviitiko nekuda kwenhamba huru yevateveri yavakagadzira.. Kazhinji, vateveri ava mafani pasi rese.
Kunzwisisa Maitiro paTik Tok
Izvo zvakakosha kuti unzwisise maitiro eTik Tok. Chokwadi, maitiro anogona kuve nemhedzisiro yakakura pamaonerwo emukati paTik Tok uye kuti mangani ekuona izvo zvaunokwanisa zvingagamuchire. Maitiro anowanzo mhedzisiro yesnowball effect. Apa ndipo panogadzirwa zvemukati uye zvinokurumidza kusimbiswa.
Sezvo inobata, nhamba iri kukura yevagadziri paTik Tok vari kugadzira zvakafanana zvemukati kana kugadzira yavo mavhezheni ezvinyorwa zviri kuita mukurumbira.. Izvi zvinobva zvaita maitiro eapp uye apa ndipo panouya kufarira kubva kune mamwe mapuratifomu..
Pamusoro pevateereri vepasi rose veTik Tok, maitiro eapp anogona kazhinji kukwezva uye kutora pfungwa dzevanhu pane mamwe masocial media mapuratifomu senge facebook uye instagram. Kufarira kubva kune mamwe masocial media mapuratifomu anogara akanaka sezvo zvichireva kuti account yako inogona kuwana mamwe maonero kubva kune vakawanda vateereri. Inogona zvakare kuvakurudzira kuti vatore Tik Tok uye vateedzere account yako.
Tsvaga azvino otomatiki ekuita chaiko pa InstagramMaitiro Ekuita Yako Yakanyanya Kubudirira Tik Tok Vhidhiyo ye2020
Tsvaga azvino otomatiki ekuita chaiko pa InstagramMaitiro Ekutora Tik Tok Maonero – Nhungamiro Inodzidzisa